अनौठो बाँध ! जहाँबाट केही फाल्यो भने तल खस्नुको सट्टा माथि पुग्छ, दृश्य देखेर वैज्ञानिक समेत परे तीन छक्क – Etajakhabar
अनौठो बाँध ! जहाँबाट केही फाल्यो भने तल खस्नुको सट्टा माथि पुग्छ, दृश्य देखेर वैज्ञानिक समेत परे तीन छक्क
एजेन्सी । चीनको एक बाँधमा एउटा यस्तो अपत्यारिलो घटना घट्छ कि कुनै पनि बस्तुलाई तल फाल्यो कि उ माथि जान्छ । सन् १९३६ मा बनेको यो बाँधमा घट्ने घटनालाई कसैले नपत्याइरहेका बेला बैज्ञानिकहरुले अनुसन्धानका क्रममा समेत त्यस्तै दृश्यहरु दोहोरीएपछि बैज्ञानिकहरु समेत चकित परेका छन् ।
अनुसन्धानका क्रममा बैज्ञानिकहरुले यो तथ्य सत्य भएको बताएका छन् । उक्त बाँधको माथी गएर तपाईले पानी फाल्नुभयो भने उक्त पानी तल खस्नुको सट्टा माथि जान्छ ।
अहिले बैज्ञानिकहरुले उक्त स्थानमा बग्ने तीब्र गतिको हावाका कारण पानी तल जानुको सट्टा माथि गएको बताइरहेका छन् । शोधकर्ता लेसलीका अनुसार बाँधबाट माथि उड्ने हावा माथी जाँदा यसैले पानीलाई गुरुत्वाकर्षको सिद्धान्तका आधारमा माथी लगेको हो ।
कोलोराडो नदीमा बनेको उक्त बाँध धनुषको आकारमा छ । यही कारणले पनि यो बाँधलाई आर्क ड्यामका नामले पनि बोलाइन्छ । जुन २२१ दशमलव ४ मिटर अग्लो र ३७९ मिटर लम्बाई रहेको छ । अनौठो बाँध जहाँबाट केही फाल्यो भने तल खस्नुको सट्टा माथि पुग्छ, दृश्य देखेर बैज्ञानिक समेत परे तीन छक्क
प्रकाशित मिति: सोमबार, आश्विन १७, २०७३ समय: १३:१२:३९